Linyi Meixu Plastic Industry Co., Ltd.
Kambani yedu ibhizinesi yemazuva ano inogadzira mabhegi ePP Akarukwa zvine hunyanzvi ane makore anopfuura gumi nematanhatu ruzivo uye tekinoroji yepamusoro yepamberi, tine vashandi mazana matatu kusanganisira vanopfuura makumi maviri ehunyanzvi uye maneja makuru.
Yakavambwa muna 2005, Linyi Meixu Plastic Indasitiri Co., Ltd. inyanzvi inogadzira indasitiri yekurongedza epurasitiki.
Zvigadzirwa zvedu zvikuru jira rakarukwa re polypropylene, mabhegi akarukwa uye mabhegi emambure, kugadzirwa kwedu kwepagore kunosvika matani 5000, zvigadzirwa zvedu zvinotengeswa zvakanyanya kunyika zhinji nematunhu kunze kwenyika, 100% yezvigadzirwa zvinotengeswa kunze. Mumusika wekunze unonakidzwa nemukurumbira wepamusoro, vazhinji vevatengi vanorumbidza nekuzivikanwa.
Kana iwe uchifarira zvigadzirwa zvedu kana wakagadzirira kuenzanisa kugadzirisa, tapota taura nesu munguva. Isu tinotenda kuti tichagadzira pane zvinodiwa uye tichagadzira hukama hwakanaka hwebhizinesi newe munguva pfupi iri kutevera
Tine 100 seti circular loom machines, uye matatu Extruding machines, 3sets high speed printing machine, and five laminated manchine,400sets machina ekusonesa. Kune madhipatimendi matanhatu mukambani yedu akadai seHofisi Yekutengeserana, Dhipatimendi reChigadzirwa uye Tekinoroji, Dhipatimendi Rekudzora Hunhu, Dhipatimendi reMari uye Dhipatimendi Rekutenga. Dzinopindirana.Uye zvakare tiri kuvandudza innovation yedu yemukati manejimendi tisingaregi .Tinorambira mumutemo we "Mutengi wepamberi, mhando yekutanga, hwaro pakuvimbika, gadzira nguva dzose". Isu takakunda kiredhiti kumira mumunda wedu uye kuvimba kwevatengi. Vashandi vedu vese vanokugamuchira noushamwari kukambani yedu uye vachaita zvakanakisa kukusevha iwe.
Neruzivo rwayo muindasitiri yemapurasitiki ekurongedza, yave kambani yakabudirira kwazvo pasi rose.
Kumiririra vese vateveri vake pamhando uye nhanho yekugadzira kuzadzisa zvinodiwa nenhamba yakawanda yevatengi ichave muenzaniso. Iva simba rinotyaira reindasitiri yekurongedza.
Mari itsva yekuzadzisa kudiwa kuri kukura. Nekushanduka-shanduka kwemugove wemusika kuwedzera. Kushambadzira kusangana nekufanotaura Enterprise Kambani ID famba kumberi. Unogona kutarisira ramangwana nechivimbo.
Sangano ibhegi rinotsvakwa muindastiri yatinoshanda nayo netsika yedu yemhando.
Nguva uye zvinodiwa kuzadzisa zvinodiwa nevatengi uye zvinotarisirwa,
Kuve nechokwadi chekutevedzera zvinoenderana nemitemo yekuona kuita kwezvigadzirwa zvedu,
Yakanakira manejimendi emazuva ano, chinangwa ndechekubvumirana nemhando yezvigadzirwa zvedu, kusangana nemusika kudiwa, kuramba uri pamberi pekuvimba,
Kwete kugutsikana nemamiriro ezvinhu aripo, pane imwe neimwe pfungwa yekutanga yekudzivirira inogara ichivandudzwa
Iyo Enterprise Culture
Iyo kambani HUMAN zviwanikwa mutemo ine chinangwa chekutenda kuti vanhu vari kuwana "vanhu," izvo zvinhu zvaanotsvaga kugadzira. Muchirevo chechinyorwa chino, kusanganisira zviwanikwa zvevanhu, masisitimu uye maitiro anobatsira kumikana yekuvandudza kwevashandi uye kurudziro yavo, masisitimu ekutanga ekugutsikana kwebasa uye mufaro anoshanda pamwechete kuvandudza kushanda zvakanaka.
• Kusandura nekuvhura kudzidza kutsva nekuenderera mberi nekuedza kuzvisimudzira
• Mafungiro echikwata uye "tinoziva" remangwana remakambani ega ega mukuedza kwavo kutora uye kuratidza kushanda kwevashandi mukati me "total quality Management" yekambani ichashanda.
• Uye mikana yebudiriro inopihwa kuvashandi kuti vasimbise pfungwa yavo yekuve vanhu, muripo wekuita-basa uye mikana yekuvandudza basa zvinoenderana nekuwedzera kwekuziva kwekambani nezvezvivakwa.
Koshesa maitiro e "vanhu kutanga" mukati memaitiro ekuremekedza zvinodiwa pakuremekedzwa kwevanhu • vashandi vanovimba navo, vanokoshesa uye vanogovana kubudirira. Yakatsaurirwa kuvanzika kweruzivo rwevashandi. Utano nekuchengeteka kwevashandi vedu, kunyanya kukoshesa hutano uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza.
Pp Woven, Biodegradable Weed Control Fabric, Kusakura Mumucheka, Heavy Duty Weed Barrier, Mvura Inopindira uye Inofema Weeding Mucheka, Weed Control Fabric Roll,